မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 01/01/2012 - 02/01/2012
Know when/who/which situation to ask
“အဆင်ပြေလား?” “အဆင်ပြေရဲ့လား?” “အဆင်ပြေပြီလား?” စတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေကို သင်တို့ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာ မေးလေ့ရှိပါသလဲ? သာမာန်အားဖြင့်တော့ ဒီစကားတွေဟာ ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက် တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ဂရုစိုက်တဲ့ အနေနဲ့ မေးလေ့ရှိတဲ့စကားတွေပါ… သို့သော် ဒီမေးခွန်းလေးတွေကို သုံးတဲ့အခါမှာ ဘယ်သူ့အတွက်သုံးတာလဲ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာသုံးတာလဲ အဲဒိလိုမေးတိုင်း လူတစ်ယောက်ကို ဂရုစိုက်ရာကျသလား ဆိုတာကို ကျွန်မတွေ့ကြုံခံစားဖူးတာလေးနဲ့ ယှဉ်ပြီး ပြောပြချင်ပါတယ်…
ဒါဆို ကျွန်မဒီစကားလေးတွေကို ဘယ်လိုအချိန်မှာသုံးလဲ… ဘယ်သူ့ကိုသုံးလဲ ဆိုတာလေးကို ပြောပြဖို့လိုလာပါပြီ… ဘာလို့လဲဆိုတော့ ခုတစ်လော ကျွန်မအယူအဆများမှားနေပြီး သူတစ်ပါးကို အထင်လွဲမိနေ သလားဆိုတဲ့ ဒွိဟပွားစရာကိစ္စတွေအတွက် မိမိကိုယ်ကို သုံးသပ်ချက်တစ်ခုချမလို့ပါ…
ကျွန်မအတွက်တော့ “အဆင်ပြေလား” “အဆင်ပြေရဲ့လား?” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးကို ကျွန်မနဲ့ ရင်းနှီးတဲ့ ကျွန်မဂရုစိုက်တဲ့ ကျွန်မပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေထဲမှာ လုပ်ဆောင်စရာကိစ္စတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာ သိရင် အဲဒိကိစ္စ အဆင်ပြေလား ချောချောချူချူမှပြီးရဲ့လားဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ် ဂရုစိုက်စိတ်နဲ့ မေးတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်… တကယ်လို့သူတို့မှာ ဘာမှ ထွေထွေထူးထူး လုပ်ဆောင်စရာကိစ္စမရှိဘူးဆိုရင် ဒီမေးခွန်းက မေးစရာမလိုဘူးလို့သတ်မှတ်ပါတယ်…
နောက်ထပ် ဒီမေးခွန်းလေးတွေကို အသုံးပြုဖို့လိုအပ်မယ်လို့ထင်တဲ့ အခြေအနေလေးတွေကတော့ ကျွန်မပတ်ဝန်းကျင်က တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့ အပြုအမူတွေ ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ထူးခြားနေမယ်… စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ပုံပေါက်နေမယ် စတဲ့ အချိန်တွေမှာ ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးမေးဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုတာကို ကျွန်မလက်ခံပါတယ်…
မည်သို့ပင်ဆိုစေ “အဆင်ပြေလား?” “အဆင်ပြေရဲ့လား?” ဆိုသည့် မေးခွန်းဟာ အဆင်မပြေခြင်း ခက်ခဲသောကိစ္စရှိနေနိုင်ခြင်း အတွက် အဆင်မှပြေရဲ့လားဟု မေးသည့်မေးခွန်းလို့ ကျွန်မကောက်ချက်ချမည်ဆိုလျှင် ကျွန်မကို ကပ်သတ်တွေးသောသူဟု ဆိုနိုင်မည်လော… အမြဲတစေ အခက်တွေ့နေသောသူဟု ယူဆ၍လူတွေ့တိုင်း ကိစ္စထွေထွေထူးထူးမရှိပဲ အဆင်ပြေရဲ့လား ဟုမေးခြင်းလို့ရော မှတ်ယူလို့ရမည်လား...
ဒီမေးခွန်းမေးခံရခြင်းအပေါ် ကျွန်မအတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ Scenario လေး ၂ခုကို ပြောပြပါမယ်… ပထမ တစ်ခုကတော့ အလုပ်က ကိုယ်နဲ့ ခင်တဲ့ မြန်မာအစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ရှင်းပေးလိုက်လို့ ကိုယ့်အယူအဆ မှားတာမဟုတ်လောက်ဖူးလို့ ကျွန်မယုံကြည်တယ်…
အဆင်ပြေလား ပြဿနာ (၁)
ပြောပြရရင်ဖြင့်… ကျွန်မရဲ့ အရင်အလုပ်မှာ လုပ်သက် ၃နှစ်နီးပါးရလောက်တဲ့အချိန်တုန်းကပေါ့… အလုပ်ကို မြန်မာအစ်မကြီးတစ်ယောက် အသစ်ဝင်ပါတယ်… ဖြစ်ချင်တော့ သူက ကျွန်မလုပ်ရတဲ့ စက်ကို ကိုင်ဖို့တာဝန်ကျပါတယ်… သို့သော် သူနဲ့ ကျွန်မက Shift မတူတဲ့အတွက် သူနေ့ဆို ကျွန်မက ည… သူညဆို ကျွန်မက နေ့ပါ… တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး အလုပ်ချိန်အပြောင်းမှာ စက်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့အရာတွေကို Passdown လုပ်ရပါတယ်…
သူ့ကို အသစ်ဖြစ်တာရော သိပ်အသားမကျသေးတာရောကြောင့် အထက်အရာရှိကိုယ်တိုင်က ကျွန်မနဲ့တကွ တစ်ခြားအဟောင်းတွေကို သင်ပြပေးဖို့ပြောထားပါတယ်… သို့သော် သူမမှာ အကျင့်တစ်ခုရှိတာက ကိစ္စတစ်ခုကို မသိလို့ ကျွန်မကိုလာမေးတယ်… ပြီးရင် အဲဒိမေးခွန်းကိုပဲ နောက်တစ်ယောက်ကိုသွားမေးတယ်… လူဆိုတာ ကိစ္စတစ်ခုတည်းကိုပဲ လုပ်ဆောင်ပုံခြင်းကွဲပြားပါတယ်… ဒီအခါ အဖြေ ၂ခုမတူရင် ဟိုကဒီလိုပြောတယ် ဒီကဒီလိုပြောတယ်နဲ့ ပြောပြသင်ပြရတဲ့သူ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်… အမှန်တော့ “ဆရာများ သားသေ” ဖြစ်နေတာပါ… မေးပြီး ကိုယ်နဲ့ အကိုက်ညီဆုံး နည်းလမ်းကိုသုံးဖို့က အဓိကပါ… လုပ်ငန်းခွင်မှာ မည်သူမှ ဇွန်း ခွံ့ (Spoon feed) မကျွေးပါဘူး… ဒါကိုပဲ ကျွန်မထက် အသက်ကြီးတဲ့ ထိုအစ်မကြီးမသိလေရော့သလား…
ကျွန်မမှာအကျင့်တစ်ခုရှိတာက သူများကို ဆရာသွားလုပ်ရမှာနဲ့ ဆရာလုပ်သလိုဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်တာပါ… အရာရှိက သူ့ကိုဆရာလုပ်ဖို့ အမိန့်ပေးထားပင်မဲ့ ကျွန်မက အားနာပါတယ်… ကိုယ်အသစ်ဝင်စတုန်းကလဲ အဟောင်းတွေက သူတို့လုပ်တာမှ အမှန်ဆိုပြီး လာဆရာလုပ်ခဲ့တုန်းကလဲ ခေါင်းအတော်စားခဲ့ရပါတယ်… အလုပ်ကလဲ ကျွန်မအမြင်တော့ ဘာမှ ခက်ခဲနေတဲ့ အရာလဲမဟုတ်ပါဘူး… ဒီတော့ သူအဆင်မပြေရင်လာမေးပါစေ… သူသိချင်လို့မေးမှပဲ ကျွန်မပြောပြလေ့ရှိပါတယ်… နောက်တစ်ချက်ကတော့ ကျွန်မကသူနဲ့ အသင်းမတူတော့ အ၀င်အထွက်ပဲတွေ့တာပါ… သူမနဲ့ အသင်းတူတဲ့ မြန်မာတွေလဲ အများကြီးမေးစရာရှိပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ အဲလိုအဟောင်းဖြစ်ပင်မဲ့ အစွယ်မပြတဲ့ကျွန်မကို သူမစိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုသဘောထားလဲတော့ကျွန်မ မသိပါ… သူမ အထင်မှာ ကျွန်မက သူ့ထက်အရင် ၁ပတ်လောက်မှ ဒီအလုပ်ကိုရောက်တဲ့သူများမှတ်နေလားမသိပါဘူး… လူကိုတွေ့ရင် “အဆင်ပြေလား ညီမ” ဆိုပြီးမေးပါတယ်… ပထမတစ်ခေါက်မေး… ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ သဘောမထားပါဘူး… “ပြေတယ် အစ်မ” လို့ပဲ ပြုံးပြီးပြန်ဖြေပါတယ်… နောက်တစ်ခေါက်တွေ့လဲ “အဆင်ပြေရဲ့လား ညီမ” ထပ်မေးပါတယ်… ဒီအခါလဲ “အော် သူနှုတ်ဆက်ချင်တာ ပြောစရာမရှိလို့ ရှာကျန်မေးတာပါလေ”ဆိုပြီး “ပြေတယ် အစ်မ” လို့ပဲ ဖြေပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ အပြုအမူကိုမူတည်ပြီး ကျွန်မခံစားရတာက တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူက Senior ကျွန်မက Junior ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလာပြုမူနေသလိုခံစားရပါတယ်… အထူးသဖြင့် သူမသည် အသစ်ဝင်လာသူဖြစ်ရုံမက လုပ်ငန်းခွင်ဖြင့် အချိန်အတော်ကြာသည်အထိ အံဝင်ခွင်ကျမရှိသေးသည့် သူက ကျွန်မလို ပြဿနာမလုပ်ချင်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်နေတဲ့ အဟောင်းကို “အဆင်ပြေရဲ့လား” လို့မေးနေတာ သိပ်တော့ မဟုတ်လှပါ… မှန်ပါသည် တစ်ခါတစ်ရံ သူမ ထားသွားသော အမှားမှားအယွင်းယွင်းဖြင့် တန်းလန်းအလုပ်များကို ဆက်လုပ်ရလျှင်တော့ အခက်အခဲများရှိပါသည်… သို့သော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဆင်ပြေသလို ပြဿနာကို ကြည့်ဖြေရှင်းပါသည်… သို့သော် အောင့်သက်သက်တော့ ရှိလှသည်… ကျွန်မ၏အကျင့်သည် ရှေ့လူမှားလုပ်သွားတာ သိသော်ညား ကိုယ်တတ်နိုင်သေးလျှင် ပြင်ပေးလိုက်သည်… ထိုသူမှားသည်ဟု သွားလက်ညှိုးထိုး ဆရာလုပ်ရမှာ အလွန်မှ ပျင်းသည်… အရာရှိကိုယ်တိုင်က သူမအမှားလုပ်လျှင် ပြန်ပြောဖို့ မှာထားသော်လည်း ထောင်သလိုဖြစ်မည်ဆိုး၍တစ်ကြောင်း ကိုယ့်မြန်မာအချင်ချင်းဖြစ်သဖြင့်တစ်ကြောင်း အကြီးအကျယ်မဟုတ်လျှင် ကျွန်မသိပ်မပြောဖြစ်ချေ….
သို့သော် တစ်နေ့တစ်နေ့ လူကိုတွေ့လျှင် “အဆင်ပြေရဲ့လား ညီမ…” ဆိုသည့် မေးခွန်းသည် ကျွန်မ၏ ရိုးတွင်းချဉ်စည်ထဲရှိ မနည်းကြိုးတုတ်ထားရသော ဒေါသနဂါးကို ကလိလာလာထိုးနေသလိုဖြစ်နေသည်… ကိုယ့်ဒေါသကို ဆွဆွပေးနေသောသူကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကျွန်မရှောင်သည်… ယခင်စိတ်ဖြင့်သာဆို ပတ်ကနဲပြန်ပြောဖြစ်ပြီး ရန်သူတစ်ယောက်ဖွဲ့မိအုံးမည်ဖြစ်သည်… ထိုအချိန်က အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုယ့်ကိုကိုယ်သုံးသပ်ပြီး ပြုပြင်နေတဲ့အချိန်မို့ ကိုယ့်ကို ကံတရားက စမ်းသပ်ဖို့လူတစ်ယောက်လွှတ်လိုက်သည်ဟုပဲ ယူဆသည်… နောက်တစ်ချက် ကျွန်မဒွိဟပွားရသည်မှာ သူမ မေးသည့် “အဆင်ပြေလား ညီမ” ဆိုသည့်မေးခွန်းသည် သူမလုပ်သွားသမျှ တလွဲများကို ပြန်လိုက်လုပ်ရတာကို မေးသည်လော မသိပါ… “အစ်မ အမှားမလုပ်သ၍ ညီမ အဆင်ပြေပါတယ်” ဆိုသည့် အဖြေပေးလိုက်လျှင်လဲ သူမကို ထိခိုက်မည်စိုးသဖြင့် မပြောလိုပါ…
ဒီအခါ ကျွန်မနှင့်ရင်းနှီးသော အလုပ်အတွင်းမှ မြန်မာအစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်ကို ဒီကိစ္စပြောဖြစ်သည်… သူက “အဲဒိအစ်မကြီး မမေးခင် ညီမက သူ့ကို အဆင်ပြေရဲ့လား အစ်မ လို့ အရင်မေးလိုက်ပါလား” တဲ့… ကျွန်မအယူအဆအားဖြင့် အပေါ်မှာပြောခဲ့သည့်အတိုင်း အဆင်မပြေသော ကိစ္စရှိနေသူကိုမှ အဆင်ပြေရဲ့လားဟုမေးလေ့ရှိသည်… သူမတွင် အလုပ်နှင့်ပတ်သတ်၍ အားနည်းချက်အများအပြားရှိသည်… သို့သော် အမှားလုပ်တတ်၍ အဆူခံရတတ်သော သူမကို အဆင်ပြေရဲ့လား ဟူသော မေးခွန်းဖြင့် နှိမ်မေး မမေးချင်ပါ…
နောက်နေ့ အဲဒိအစ်မကြီး အလုပ်လာတော့ ကျွန်မပြောပြခဲ့တဲ့ အစ်ကိုကြီးက သူမကို “အစ်မ ဘယ်လိုလဲ အဆင်ပြေရဲ့လား” လို့ မေးလိုက်ပါတယ်… ထိုအခါ သူမက “ဘာဖြစ်လို့လဲ…” ဆိုပြီး ခပ်ဆပ်ဆပ်ပြန်မေးပါတယ်… “အော် ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး… ဒီလိုပဲမေးကြည့်တာပါ အကူအညီလိုရင်ပေးရအောင်လို့ပါ” လို့ပဲ ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်… သို့သော် သူမ၏ မျက်ဝန်းပေါ်က မခံချင်လေးကိုတော့ ကျွန်မတို့ ၂ယောက်လုံး ကောင်းစွာသတိထားလိုက်မိပါတယ်…
ဒါတောင် ကျွန်မတို့ ၂ယောက်လုံးက သူ့ရဲ့ Senior တွေပါ… လုပ်သက်ကြာနေတဲ့သူက အသစ်ဝင်တဲ့သူကို အဆင်ပြေလား မေးတာက သဘာဝကျပါသေးတယ်… အမှားပေါင်းစုံလုပ်နေတဲ့ အသစ်က အဟောင်းကို တွေ့တိုင်း အဆင်ပြေလားမေးနေတာတော့ သိပ်မဟုတ်သေးပါ… ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ ပြန်သုံးသပ်ကြည့်တယ်… တကယ်တော့ တချို့နေရာတွေမှာ သင်ပြရဲတာ ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါ… Leadership skill (ဦးဆောင်နိုင်စွမ်း) ဟုသာခေါ်မည်ထင်ပါတယ်… ပြဿနာမဖြစ်ချင်၍ အေးအေးနေလို့မရပါ… တစ်ခါတစ်ရံ နဂါးမှန်းသိရန် အမောက်ထောင်ပြဖို့လိုပေလိမ့်မည်…
ထိုနေ့မှစ၍ ကျွန်မသူမကို တွေ့လျှင် “အစ်မ အဆင်ပြေရဲ့လား” ကို အရင်မေးသည်… သူမ မျက်နှာပျက်သွားသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီစကားအမေးခံရတာကို သူမလဲ မကြိုက်ဟု ကျွန်မယူဆသည်… မည်သို့ပင်ဆိုစေ သူမကို ဒီစကားမေးဖို့ ကျွန်မတွင်တာဝန်ရှိသည်… သူမ အမှားလုပ်သွားလျှင် ကျွန်မပြောသည်… သူမ အလုပ်များ တန်းလန်းပေးလျှင် အပြီးလုပ်ခိုင်းသည်… ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မရသည့်သင်ခန်းစာကတော့ တစ်ခါတစ်ရံ ဦးဆောင်နိုင်စွမ်းသည် ဆရာလုပ်ခြင်းမဟုတ်…
သူမကို ကြည့်၍ရသော သင်ခန်းစာသည် အလုပ်တွင် အသစ်ဝင်လျှင် အသစ်လိုနေ အဲဒိအလုပ်က လူတွေအကြောင်းမသိခင် အမောက်မထောင်ရန်ဖြစ်ပေသည်… (လူတွေအကြောင်းကလဲ လအနည်းငယ်ဖြင့်ပင် သိနိုင်သည် မဟုတ်ခြေ)…
Is it really Okay to say I'm not bcoz of ur question "R U OK?"
အဆင်ပြေလား ပြဿနာ (၂)
ယခု ကျွန်မ အလုပ်သစ်ကိုရောက်တာ ၆လပင်ရှိခြေပြီ… ရှေ့အလုပ်က သူများတွေကို သင်ခန်းစာယူကာ တတ်နိုင်သမျှ ကွန်ပလိမ်းမများ အသစ်လိုနေသည်… အသစ်ဖြစ်၍ ကိုယ့်အလုပ်မှန်းမသိ သူများအလုပ်မှန်းမသိ လာခိုင်းသမျှကိုလဲ တတ်နိုင်သလောက်လုပ်ပေးသည်… ကျွန်မလက်ရှိရောက်နေသော ကုမ္ဗဏီသည် အရင်အလုပ်ဖြင့် ဆန့်ကျင်ဖက်… မြန်မာနည်းလှသည်… ရှားရှားပါးပါး ကျွန်မ အထပ်တွင် ကျွန်မနှင့် တခြားဋ္ဌာနမှ မြန်မာ အစ်ကိုကြီး ၂ယောက်သာရှိသည်… ကျွန်မသူဋ္ဌေးက အလုပ်စ၀င်တဲ့နေ့ကပင် ရှားပါး မြန်မာမို့ မိတ်ဆက်ပေးသည်… ကိုယ်တိုင်လဲ မြန်မာလူမျိုး တစ်ယောက်ရှိ၍ အားတက်မိသည်… သို့သော် စစချင်း စောက်နဲ့ထွင်း မေးခံရတဲ့ မေးခွန်းကတော့ “ညီမက ဒီမှာ ဘယ်လို အလုပ်ရတာလဲ” တဲ့…. ရောာာာာာာာာာာာာ…
ချဉ်စည်ထဲက ဒေါကနဂါးကို တုတ်နဲ့ လာထိုးပြန်ပါပြီ… “Jobstreet မှာတွေ့လို့ အလုပ်လျှောက်လိုက်ပြီး အင်တာဗျူးဝင်ပြီး ရတာပါ” လို့ပဲဖြေလိုက်ပါတယ်… ဟုတ်တယ်လေ… အလုပ်ဘယ်လိုရလဲဆိုတော့ ရှင်းရှင်းလေးပဲ လျှောက်လို့ရတာပေါ့… သူတစ်ယောက်ပဲ ဒီကုမ္ဗဏီမှာ အလုပ်ရလား… တခြားမြန်မာ မရရဘူးလား… သူကတော့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေလဲ အတော်ရှိခဲ့သလို ဒီကုမ္ဗဏီမှာလဲ အတော်ကြာနေတဲ့ Senior Engineer ပေါ့… ကျွန်မက သူ့လောက်တော့ ရာထူးမရှိပါဘူး… ကိုယ်က ပိုလီပဲပြီးထားတယ်… သူ့လောက်လဲ လုပ်သက်မရှိသလို အသက်လဲမကြီးသေးပါဘူး…
နောက်ရက်တစ်ရက်မှာ မြန်မာအချင်းချင်းရင်းနှီးအောင် ဋ္ဌာနချင်းမတူသော်ငြား နေ့လည်စာတူတူသွားစားဖြစ်ပါတယ်… အဲဒိမှာလဲ မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းတွေက ကျွန်မနဲ့ အပေါက်လမ်းသိပ်မတည့်ပါဘူး… ကျွန်မကပဲ သိပ်အတွေးလွန်ပြီး ကပ်သပ်တတ်တာလား လို့ ဝေခွဲမရဖြစ်ရပါတယ်… မှတ်မိသလောက် မေးခွန်းလေးတွေ ဥပမာပြောပြပါမယ်…
၁) ညီမက ဒီမှာ ဘာလုပ်ရတာလဲ (လတ်တလောတော့ အသစ်ဆိုတော့ သင်ယူနေတုန်းပေါ့)
၂) Techinical နဲ့ ပတ်သတ်တာတွေကို ညီမလုပ်နိုင်လို့လား
၃) ဘာစတေးနဲ့ နေနေတာလဲ
(Personal မေးခွန်း သို့သော် မြန်မာအချင်းချင်း အလိုက်မသိသူများမေးလေ့ရှိသဖြင့် စိတ်မဆိုးသေးပါ… ဖြေတော့ မယုံသည့်ပုံစံဖြင့်… ရောက်တာ ၉နှစ်ရှိတဲ့သူကိုများ… သူရောက်တာမေးကြည့်တော့ ၄နှစ်လောက်ပဲရှိပြီးတော့… )
၄) အိမ်ဝယ်ထားတယ်ဟုတ်လား၊ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး အိမ်ဝယ်လို့ရတာလဲ…
(ကျွန်မအသက်အရွယ်မှာ အိမ်ထောင်ကျနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေရှိတဲ့အတွက် ဒီမေးခွန်းကို ကျွန်မစိတ်မဆိုးပါဘူး… သို့သော် စိတ်ထဲ အမြင်မတူဖြစ်မိတာက နောက်ဆက်တွဲလာတဲ့ သူ့ရဲ့ သုံးသပ်ချက်ကိုပါ)
၆) ခုခေတ်မှာ မိန်းကလေးတွေက အိမ်ထောင်ကျစောကြတယ်လေ…
(ဘုရားရေ… ကျွန်မ မြင်တွေ့နေတဲ့ စကာင်္ပူက မိန်းကလေးတွေကတော့ ကျောင်း အလုပ် စာ စသည်ဖြင့် အနာဂတ်အတွက် ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေလို့ ပျမ်းမျှအားဖြင့် အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်လောက်မှ အိမ်ထောင်ပြုကြသူများပါတယ်… သူ့ သုံးသပ်ချက်က ဘာကိုကြည့်ပြီးပြောလဲမသိပါ)
ထိုသို့ထိုသို့သော် မေးခွန်းများကိုသည်းခံကာ နေ့လည်စာတစ်နှပ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီးနောက် ထိုသူဖြင့် နောက်လုံးဝ ထမင်းထွက်မစားဖြစ်တော့ပါ… သို့သော် တစ်ခါတစ်ရံ သူနှင့် Office Pantry တွင်သော်လည်းကောင်း ၀င်ပေါက်တွင်သော်လည်းကောင်းတွေ့လျှင် နှုတ်ဆက်သည့်အနေဖြင့် သူကျွန်မကို မေးတတ်သည့်စကားက “အဆင်ပြေရဲ့လား” တဲ့…
တခြားစကားတွေဖြင့် အများကြီးနှုတ်ဆက်လို့ရသည်… အဘယ်ကြောင့် ဤစကားကိုမှ သုံးသနည်း… သူက အဟောင်း ကိုယ့်ထက်လဲ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ နည်းပညာအတွေ့အကြုံရှိသဖြင့် မေးခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆကာ ယခုထက်ထိဖြေသိမ့်နေသေးသည်…
သို့သော် စိတ်ထဲမှတော့ စပ်ကနဲ ပြန်မေးမိသည် “အဆင်မပြေတော့ အစ်ကိုက ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်မှာမို့လဲ” ဟု ဆိုလျှင် ကိုယ်က ဘုပြောသည်ဖြစ်မည်… ဟုတ်သည်… သူက ကျွန်မနှင့်လဲ ဋ္ဌာနမတူ… ကျွန်မတို့ ဋ္ဌာနဘာလုပ်သနည်းဆိုတာတောင် သူသိပုံမပေါ်… ယခုထက်ထိလဲ သူ့အကူအညီဘာမှ မလိုပဲ အဆင်ပြေနေသည်…
ကိုယ်ပဲ သိပ်အတွေးခေါင်နေသလား လူမှုရေးခေါင်းပါးနေသလား… ကိုယ်ပဲ “အဆင်ပြေရဲ့လား” ဆိုတဲ့ မေးခွန်း အသုံးပြုပုံကို သေချာမတတ်တာလား… ထိုသူပဲ တစ်ခုခုမှားနေသလား ကျွန်မဝေခွဲမရပါ… သို့သော် ထိုသူမေးသော အဆင်ပြေရဲ့လားဆိုသည့် မေးခွန်းအပေါ် ကျွန်မစိတ်ထဲ သိပ်သဘောမကျလှပေ…
၁) မြန်မာအချင်းချင်း အဆင်မပြေမှာစိုးရိမ်၍ (ဂရုစိုက်၍) မေးခြင်းလော
(သို့သော် သူ့မျက်နှာတွင် Sincere ဖြစ်သောပုံတော့ မတွေ့ချေ)
၂) ဒီကောင်မလေး ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီး အထင်သေးသဖြင့် မေးခြင်းလော
ယခုလောလောဆယ်အထိတော့ ကျွန်မ အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်နေပါတယ်… အ၀င်အထွက် မျက်လုံးချင်းမစုံအောင် နေပါတယ်… စုံခဲ့လျှင်လဲ သူဘာမှ မပြောခင် ပြုံးပြ ရီပြကာ အလုပ်များချင်ယောင်ဆောင်ကာ သုတ်သုတ်လျှောက်ပါတယ်…
ဤပိုစ့်ကို ရေးဖြစ်ခြင်းမှာ ဟိုနေ့က မတော်တစ်ဆ Pantry ထဲမှာ သွားဆုံတော့ မေးခံလိုက်ရတဲ့ အဆင်ပြေရဲ့လား ဆိုတာကြောင့်ပါပဲ…. ၆လရှိပြီ…
မေးလိုက်ချင်သည်က… စာဖတ်သူတွေရော “အဆင်ပြေရဲ့လား” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ သုံးတတ်ပါသလဲ…
ဘယ်သူတွေကို ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ မေးမှာလဲ...
Posted by mabaydar at 6:04 PM 11 comments :
Ep 1 of Hong Kong trip - Preparation for trip
ကျွန်မရဲ့ ခရီးသွား ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းလေးရဲ့ အစ ဗီဇာလျှောက်ခြင်း၊ ဈေးဝယ်ထွက်ခြင်း၊ အထုတ်အပိုးပြင်ခြင်း ဗွီဒီယိုလေးပါ... ခရီးမသွားခင် ရိုက်ထားခဲ့တာပါ... ခုမှ အက်ဒစ်လုပ်ပြီးတင်ဖြစ်ပါတယ်... youtube မှာတင်တာ သီချင်းက copyright ငြိလို့ အသံ ဖျောက်ခံထားရပါတယ်... အဲဒါကြောင့် Vimeo ကနေတင်လိုက်ပါတယ်...
Untitled from mabaydar on Vimeo.
အပေါ်ကဗွီဒီယို ကြည့်မရသူများအတွက်... ဘလော့မှာ တင်လိုက်တယ်...
Posted by mabaydar at 12:39 PM9comments :
Labels: Video , ခရီးသွားမှတ်တမ်း , ဟောင်ကောင်ခရီးစဉ်
Away from Blog Massage
တစ်နေ့ရောက်အောင် ဖူးမယ်ဆိုတဲ့ ဘုရားကြီးကို သွားဖူးပါပြီ...
I will be away from this blog from Next3hours later and will return as soon as I am back to home. During my leave, I have phone access but that was provided only for business matter. Therefore, I will probably turn it off the phone unless otherwise I want to use it. So in other words, you can not contact me.
But if I can easily access internet from my hotel, I might be online once inawhile, so you may write in English at the comment session below as there will not be Myanmar Font.
For urgent matter, there's always another person who could easily replace me as I know clearly about the fact that I am not irreplaceable in every place. I am sometime disappointed with myself for being like that. But well anyway, don't think I am sad... I am very happy with my life and where I am now.
I am sure I will be takingalot of photos and videos which I am not sure I will edit them and put them on blog. (I am suchalazy person, aren't I?) But I will try my best for the travel post about Hong Kong for my lovely readers who would be waiting for the travel post. (မယုံနဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးနေပြန်ပြီ)
Well anyway, while you are reading this post, I am happily enjoying every good things of Hong Kong and over spending the bonus thinking myself like Billionaire. Don't get JEALOUS OF ME. COZ LIFE IS TOO SHORT TO BE JEALOUS OF OTHERS. WA HA HA
Posted by mabaydar at 3:22 AM6comments :
Friday, 13th but I am happy
International wide, Friday 13th is told to beaday with bad Luck.
According to Wikipedia, in the Gregorian calendar, this day occurs at least once, but at most three timesayear. Any month's thirteenth day will fall onaFriday if the month starts onaSunday. That's something interesting which I just found out.
Especially, this year 2012 has most numbers of Friday, 13th which occurs3times.
Whatever as I am Theravada Buddhism I am not really serious about Friday the 13th. I am feeling happy coz there are people from my country, Myanmar (last time known as Burma) who I don't know personally outside has got their freedom. Freedom which mean freedom from Jail which they were kept due to their believes.
Whatever, I am really happy for them. But I am sad for those few numbers of political prisoners who still being kept in the prison.
Somehow, the first Friday the 13th of year 2012 has bring some good news to whole Burmese community. I wish all the best for my country and people.
Posted by mabaydar at 1:27 PM4comments :
ဒီပိုစ့်ကိုတော့ မေးခွန်းလေးတစ်ခုနဲ့ဖွင့်ချင်ပါတယ်... သင်တို့တွေ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးအများစု အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတာကိုကြားတဲ့အခါ ဒါဖိလစ်ပိုင်တွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်အသံပဲလို့ ခန့်မှန်းနိုင်လား? တနည်းအားဖြင့် ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးအများစုရဲ့ အင်္ဂလိပ် Accentဟာ အမေရိကန်လူမျိုးတွေပြောတဲ့ English Accent အတိုင်း တထေရာတည်းတူတယ်လို့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ပြောနေတာကို လက်ခံလား?
အဲဒိမေးခွန်း ၂ခုလုံးအတွက် ကျွန်မရဲ့အဖြေကတော့ ဖားတွေကို(ဤနေရာမှစ၍ ဖိလစ်ပင်းလူမျိုးကို အပြင်မှာအားလုံးသုံးတဲ့အတိုင်း ဖားလို့ နာမ်စားသုံးပါမည်) လူမတွေ့ပဲ သူတို့ အင်္ဂလိပ်လိုပြောနေတဲ့အသံကိုကြားတာနဲ့ ဒါဟာ ဖားပြောနေတာပဲလို့ တန်းသိပါတယ်... ဥပမာ ဖုန်းပေါ်ကနေ ခရက်ဒစ်ကဒ် promotion လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ် အာမခံရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် Customer service ကိုခေါ်လို့လာကိုင်တာက ဖားပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ အင်္ဂလိပ်သံကိုကြားတာနဲ့ ဒါဟာ အမေရိကန်တစ်ယောက်ပြောနေတာမဟုတ်ပဲ ဖားလူမျိုးတစ်ဦးဆိုတာကို သိသိသာသာ ကွဲကွဲပြားပြားခွဲခြားသိပါတယ်... သင်တို့ရော ခွဲတတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်... သို့သော် သူတို့ကိုယ်သူတို့ယုံကြည်ထားကြတာက သူတို့ အင်္ဂလိပ် Accent ဟာ အမေရိကန်တွေပြောတဲ့အတိုင်းတစ်ထပ်တည်းရှိပါတယ်လို့ ပြောတာကို ကိုယ်တိုင်လဲတွေ့ကြုံခဲ့ရဖူးသလို အွန်လိုင်းပေါ်မှာလဲ မျက်စိစပါးမွှေးဆူးလောက်အောင် မြင်နေရတဲ့အခါ ဒီပိုစ့်လေးကိုရေးပြီး ပေါက်ကွဲလိုက်ပါတယ်...
ဒီပိုစ့်ကို ဟိုးအရင်၂၀၁၀ လောက်ကတည်းက ရေးဖို့စိတ်ကူးခဲ့ပင်မဲ့ မဗေဒါက လူမျိုးရေးခွဲခြားသလိုဖြစ်မှာ... ပြီးတော့ ၁ဦး၁ယောက်တည်းကိုကြည့်ပြီး အားလုံးကို Stereotype လုပ်ပြစ်လိုက်သလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ပါ... သို့သော် လက်ယားလောက်အောင် ရေးချင်လွန်းစရာတွေက တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာတော့ ကိုယ်လဲကိုယ့်ဘလော့မှာ မြန်မာလိုရေးပါတယ်... လူမျိုးရေးခွဲခြားပြီး Stereotype လုပ်လိုတဲ့ ဆန္ဒအလျင်းမရှိသော်လည်း အမှန်ကို လက်မခံပဲ ဖင်ပ်ိတ်ငြင်းနေကြတဲ့ ဖားလူမျိုးများကို ကြည့်မရသောကြောင့် ရေးပါတယ်... ဤသို့ရေးခြင်းမှာ ဖားလူမျိုးများ အင်္ဂလိပ်စကားပြောညံ့သည်ဟု မဆိုလိုပါ... အများစုသည် အမေရိကန်တွေပြောတဲ့လေသံအတိုင်း မထွက်တာကိုပဲ ပြောလိုခြင်းဖြစ်သည်ကို ကွဲကွဲပြားပြား နားလည်စေချင်ပါသည်...
အရင့်အရင် ကျောင်းသူဘ၀ Part time လုပ်ကတည်းက အလွန်တရာမှ ရွပိုးထိုးသော ဖားမ အမြောက်အများနဲ့ အလုပ်လုပ်ဖူးပါတယ်... ဒီပိုစ့်မှာ ဖားမ များရွပိုးထိုးခြင်းကို ပြောလိုသောကြောင့်လဲမဟုတ်... ရွပိုးထိုးသော ဖားမများကိုလက်ညှိုးထိုးကာ ဖားမအားလုံးရွသည်ဟုလဲ လက်မခံပါ... တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းပေါ်သာ မူတည်သောကြောင့် ဘာမှ မပြောလိုပါ...(စိတ်ထဲမှပြောခြင်း... ဒါပေမဲ့ တွေ့ဖူးသမျှဖားမ မရွသူမရှိ... သို့သော် သူတို့ကို ချောင်ပိတ်ရိုက်ကာ ဆုံးမသော ဦးနှောက်မဲ့ ဖားထီးများလဲ ရှိသည်ဟု မကြားမိ)... မည်သို့ပင်ဆိုစေ သူတို့အပြုအမူနှင့်ကိုယ့်အပြုအမူ မတူညီသောကြောင့် အစေးကပ်ကပ်ပေါင်းသင်း ရလှသည်တော့မဟုတ်ခဲ့ပါ... အဲဒိတုန်းကတော့ ပညာသိပ်မတတ်တဲ့ Labor နဲ့အလုပ်လုပ်လာလုပ်တဲ့ ဖားတွေမို့ ဒီလိုဖြစ်မှာပါ... ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဖားမတွေကတော့ ဒီလိုမဟုတ်လောက်ပါဘူးပဲထင်ခဲ့တယ်...
ခုပြောပြမှာကတော့ မဗေဒါကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့ပတ်သတ်ရင် Over confident ဖြစ်နေတဲ့ ဆရာလုပ်တဲ့ ဖားမပဲဖြစ်ပါတယ်... ကျောင်းပြီးလို့ ကျွန်မရဲ့ ဒုတိယအလုပ်မှာ ကျွန်မထက်ရာထူးကြီး Senior ကျတဲ့ ဖားမတစ်ယောက်ရှိပါတယ်... ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒိကုမ္ဗဏီမှာ ဖားလူမျိုးအများအပြားရှိပြီး နေရာကောင်းထိပ်ပိုင်းမှာတောင် ဖားတွေက နေရာယူထားပါတယ်... ကိုယ်လဲ Part time တုန်းက စိတ်ခံတွေကိုဖျောက်ပြီး "အော် ပညာတတ်အသိုင်းအ၀ိုင်းကတော့ ဒီလိုမဟုတ်လောက်ပါဘူးဆိုပြီး စိတ်စွဲကိုဖျောက်ခဲ့ပါတယ်"... ဒါပေမဲ့ နေ့လည်ထမင်းစားတူတူထွက်လျှင် ပြောသမျှဟာသဖြစ်စေ ဗဟုသုတဖြစ်စေ သတင်းအချက်အလက်ဖြစ်စေ သူပြောသမျှဟာ နှာနဲ့ပတ်သတ်တာတွေချည်းပါပဲ... တစ်ဋ္ဌာနလုံးမှာ လူလွတ်မိန်းကလေးဆိုလို့ ကျွန်မတစ်ယောက်ပဲရှိတာပါ... လူလွတ်ယောကျာင်္းလေးက ၂ယောက်ပါ... ၁ယောက်က အင်ဒိုကောင်... နောက်တစ်ယောက်က မြန်မာအစ်ကိုကြီးပါပဲ... တစ်ခါတစ်လေ မျက်နှာဘယ်နားထားရမှန်းမသိအောင် ပြောတတ်ပါတယ်... ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက်ပါ... တစ်ချို့သူပြောတဲ့ ဟာသတွေဆို ဘာတွေမှန်းတောင် ကျွန်မနားမလည်ပါဘူး... ညစ်ညမ်းမယ်ဆိုတာတော့ ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်... တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်က သဘောရိုးနဲ့ ပြောတဲ့စကားလဲ သူကနှာတွေးတွေးပြီး ဟားတတ်ပါသေးတယ်... နောက်ပိုင်း သူပါလို့ ဋ္ဌာနကလူတွေနဲ့တောင် ကျွန်မထမင်းထွက်မစားတော့ပါဘူး... (အော်.. ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်တွေ လျှာရှည်မိပြန်ပြီ... လိုရင်းက အင်္ဂလိပ်စကားပြော လေသံအကြောင်းပြောမှာ)
သူက သူများကို ဟားတိုက်ရတာ အလွန်မှ ၀ါသနာပါပုံရပါတယ်... အလုပ်ထဲက Malaysian တွေကိုဆိုရင်လဲ သူတို့ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ်အသံကို မေးမေးပြီး ရီတတ်ပါတယ် (ကျွန်မအမြင်တော့ လှောင်တာပါ)... ဥပမာ Malaysian တွေက Zero (ဇီးရိုး) ကို (ဂျီးရိုး)... Zebra (ဇီးဘရား)ကို (ဂျီးဘရား) စသည်ဖြင့်ထွက်တတ်ပါတယ်... Malaysian တရုတ်နဲ့ စလုံးတရုတ်ရဲ့ အင်္ဂလိပ်သံကွားခြားချက်တွေကို အဲလိုအသုံးအနှုန်းတွေမှာ သိနိုင်ပါတယ်... တရက်တော့ သူ့ကွန်ပြူတာက Window တစ်ခုက ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး သူပိတ်ချင်တာ ဘယ်လိုပိတ်ရမှန်းမသိလို့ ကျွန်မကိုမေးတော့ ကျွန်မက ညာဘက်အပေါ်ထောင့်က "Red Dot" လေးကို နှိပ်လိုက်လို့ပြောတော့... သူက နားမလည်ပဲ ပြန်ပြန်မေးပါတယ်... ကျွန်မပြောတာကို ဘေးက အင်ဒိုကောင်လဲနားလည်တယ်... Malaysian တရုတ်မလဲ နားလည်တယ်... နောက်ဆုံး ကျွန်မထိုင်ရာကထပြီး လက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြမှ သူက "Oh..... you mean "Red dottttt" I thought you are saying "Red DOGGG" ဆိုပြီး ကျွန်မ အင်္ဂလိပ်အသံကပဲ မကောင်းလို့သူနားမလည်တာဆိုတဲ့ ပုံမျိုးနဲ့ လူကိုတောင် အသံထွက်လာပြင်ပေးနေပါသေးတယ်... ဦးနှောက်ရှိတဲ့သူတိုင်းသိပါတယ်... သူ့ကွန်ပြူတာပေါ်မှာ အနီရောင်ခွေးရှိသလား၊ အနီရောင် အစက်ရှိသလားဆိုတာပါ... ကျွန်မပြောတဲ့ အသံထွက်က အမေရိကန်တွေလို RED DOTTTTTTTT လို့ မထွက်ရင်တောင် ကျပ်ပြည့်တဲ့သူက အနီးစပ်ဆုံးဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာ သိမှာပါ... ပြီးတော့ သူကရှက်ယန်းယန်းပြီး ငါတို့ ဖားလူမျိုးတွေရဲ့ အင်္ဂလိပ်အသံက အမေရိကန်အသံစစ်တယ် ဘာညာနဲ့ ပဏာဝင်ယူနေပါသေးတယ်... အဲဒိအချိန်က အရူးဘုံမြှောက်ရင် ချီးခြောက်ကောက်စားတတ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားအတိုင်း သူ့ကို မြှောက်ပေါင်းရင်တော့ အနေချောင်မယ်ဆိုပင်မဲ့... မပြည့်တဲ့အိုး ဘောင်ဘင်ခတ်နေတဲ့ ဖားမကို မကြားချင်ယောင်ဆောင်ပြီးပဲ နေပစ်လိုက်ပါတယ်... စိတ်ထဲမတော့ နင်တို့ဖားတွေ လေသံဟလိုက်တာနဲ့ အုံးအမ်ဆိုတာ သိသာတယ်... အုံး(စ်)အမ်(စ်) မဖြစ်ဘူးလို့ ပြောပြစ်လိုက်ပါတယ်...
ကိုးရီးယား မင်းသမီးချော လီဒဟဲနဲ့ ဖားများ ပြဿနာ
ဖားတွေရဲ့ သူတို့ရဲ့ အင်္ဂလိပ်လေသံဟာ အမေရိကန်အတိုင်းပဲလို့ယုံကြည်တဲ့ သွေးနားထင်ရောက်စိတ်ဓာတ်တွေမှာ ဓားစာခံဖြစ်သွားရတဲ့ မင်းသမီးချော လီဒဟဲ (My Girl, East of Eden, Miss Ripley) ကို အစကတည်းကကြိုက်ခဲ့ပြီး ယခုဆိုရင်တော့ ကျွန်မဟာ သူ့ရဲ့ Die hard fan အဖြစ် ဂရုဏာသက်ကာ ၂ဆတိုး အားပေးချင်စိတ်ဖြစ်သွားပါတယ်... အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း (မသိရင်လဲ ဆက်ဖတ်လိုက် သိလိမ့်မယ်) ကိုရီးယား မင်းသမီးတွေထဲမှာ အင်္ဂလိပ်လို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောတတ်တဲ့ သူဆိုတာလက်ချိုးရီလို့ရပါတယ်... ထိုအထဲမှာ မင်းသမီးချော လီဒဟဲလဲ အပါအ၀င်ပါပဲ...
့ဖြစ်ပုံကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာလ လောက်တုန်းက KBS2TV variety show, “Sweet Night“ ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်မှာ မင်းသမီးကို အစီအစဉ်တင်ဆက်သူက အင်္ဂလိပ်စကားပြောနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသံကွဲလွဲပုံကို လုပ်ခိုင်းတော့ English, American နဲ့ Filipino အသံနဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောပြပါတယ်... ဒါကို ဖားတွေက သူတို့လူမျိုးတွေက အဲလိုမပြောပါဘူး... အမေရိကန်လေသံစစ်စစ်နဲ့ ပြောတာပါ... ဒီမင်းသမီးတောင်းပန်ပါဘာညာဆိုပြီး အွန်လိုင်းမှာလဲ မင်းသမီးကို ၀ိုင်းဆဲကြဘာကြနဲ့ ရစရာမရှိအောင် တခြားအကြောင်းအရာတွေပါဆွဲထည့်ပြော... ကိုရီးယားတွေ အင်္ဂလိပ်လိုညံ့တာကို နှိမ်ပြော... ကိုရီးယားတွေ အင်္ဂလိပ်လိုမတတ်လို့ သူတို့ ဖားတွေဆီလာပြီး အင်္ဂလိပ်စာသင်ရတာကို ဂုဏ်တင်ပြီးပြောနဲ့ မပြီးနိုင်မစီးနိုင်ဖြစ်ကြပါတယ်...
နောက်ဆုံး မင်းသမီးက သူမရဲ့ Tweeter ကနေ ဖားတွေကို တောင်းပန်ပါတယ်... ဒါတောင်မှ တောင်းပန်တာကို မကျေချမ်းပဲ ဆက်လက်အပြစ်တင်နေတဲ့ သူတချို့ကိုလဲ တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်... ပွဲလန့်တုံး ဖျာဝင်ခင်းတဲ့ ဖားတချို့ကတော့ Youtube ပေါ်မှာတောင် လီဒဟဲကို ပြောဆိုတဲ့ ဗွီဒီယိုတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖားလေသံကိုဖျောက်ပြီး သူတို့ပြောတဲ့ အမေရိကန်လေသံနဲ့ တင်ထားတာကိုလဲ ရှာကြည့်ရင်တွေ့နိုင်ပါတယ်... အဲဒိအောက်မှာလဲ သူတို့ ဖားတွေ အင်္ဂလိပ်လေသံ ကောင်းကြောင်းကို မင်းသမီးကပဲ မဟုတ်မမှန် နှိမ်ချပါတယ်ဆိုပြီး ပြောထားကြပါတယ်... (သူတို့ ဗွီဒီယိုကို promote လုပ်သလိုဖြစ်မှာစိုးလို့ ဒီမှာ မတင်ပေးတော့ပါဘူး... ကိုယ်တို့ကတော့ ဘူးဆို ဘူးပဲ... So What?)
မင်းသမီးသူတို့ကို လှောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ဗွီဒီယိုကိုတော့ Copyright claim လို့ youtube မှာ ဘယ်လိုရှာရှာ မရှိတော့ပါဘူး... သို့သော် Copyright တွေဘာတွေ Don't giveadamn တဲ့ ချစ်ပေါက်ဖော်ကြီးတွေ ၀က်ဆိုဒ်မှာတော့ ဒီဗွီဒီယိုကို သွားတွေ့ပါတယ်... Embedded လုပ်တာ မလုပ်တတ်လို့ လင့်လေးကနေပဲ သွားကြည့်လိုက်ပါ...
အမှန်တော့ လီဒဟဲကလဲ လှောင်ချင်တဲ့စိတ်ထက် အပျော်သဘောပြောရုံသက်သက်လို့ထင်ပါတယ်... ပြီးတော့ ဒီလိုပြဿနာကြီးသွားရတာလဲ ကိုရီးယား အနုပညာလောကဟာ ဖိလစ်ပင်းမှာ အတော်လေးလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာသိသာပါတယ်... သူတို့နိုင်ငံမှာလဲ မင်းသမီးမင်းသားရှိတာပဲ ဘာလို့ ကိုရီးယားမင်းသမီးလာကြိုက်လဲ... ပြီးတော့ သူတို့က မခံနိုင်ဖြစ်ကြသေးတယ်... သဘောထားသေးသိမ်တယ်လို့ထင်တာပဲ... ပြီးတော့ ကိုရီးယားမှာပြတဲ့ ကိုရီးယားလိုပြောတဲ့ အစီအစဉ်မှာ ကိုရီးယားမင်းသမီးက ဟာသ သဘောပြောတာကို အတင်းရောကာရော စိတ်ဝင်စားပြီး ကြိုက်လို့ လိုက်နားထောင်လို့ သူတို့သိတာပေါ့... (စိတ်ထဲကပြောခြင်း... ၀တ်မှုန်ရွှေရည် အဲလိုပြောရင် သူတို့ သိမလားပြော)... တစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့ တစ်မျိုး Make fun လုပ်ပြီး ပြောနေကျကို "အနာပေါ် ဒုတ်ကျ"ဖြစ်ပြီး ဆက်ဆက်ထိမခံနာပြနေကြတဲ့ ဘောင်ဘင်ခတ်တဲ့ဖားတွေဟာ မပြည့်ဝဘူးဆိုတာ အသေအချာပါပဲ... တဆက်တည်းပဲ မင်းသမီးကိုလဲ ပိုလို့တောင် အားပေးချင်သွားပါတယ်... သူမကိုယ်တိုင်ကလဲ ချောလဲချော သရုပ်ဆောင်လဲ ကောင်းပါတယ်...
"The Noose" Show : Leticia by Michelle Chong
စကာင်္ပူ Channel5ပြသမျှထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးစာရင်းထဲပါတာ The Noose ပါ... သူဟာ စကာင်္ပူမှာဖြစ်ပျက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဟာသလုပ် လှောင်ပြောင်တဲ့ အစီအစဉ်ပါ... ဒီအစီအစဉ်မှာ တစ်ခါတစ်လေ သူတို့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကို မထိတထိလှောင်တာတွေ၊ စလုံးတွေရဲ့ အတ္တစိတ်ကို လှောင်တာတွေ၊ ပြည်ကြီးတရုတ်မတွေရဲ့ ချိုင်းမွှေးမရိတ်တာကိုလှောင်တာတွေ စသည်ဖြင့် အပြင်မှာဖြစ်နေတာတွေကို တင်ဆက်တဲ့ ဟာသအစီအစဉ်လေးပါ... အရင်က စလုံးမင်းသမီးတွေကို မကြိုက်ပင်မဲ့ အဲဒိအစီအစဉ်မှာ ပင်တိုင်ပါဝင်တဲ့ တင်ဆက်သူ စလုံးမင်းသမီး Michelle ကို အဲလို ဟာသပုံနဲ့ သူသရုပ်ဖော်ရတဲ့ ပုံစံကို မရှက်တမ်း ဈာန်ပါပါလုပ်တတ်လို့ ကျွန်မသဘောကျပါတယ်... သူမဟာ လူမျိုးတော်တော်များများရဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားပြောဟန်ကွဲပြားပုံတွေကိုလဲ တုပြီးလိုက်ပြောတတ်ပါတယ်... သူမဟာ ပြည်ကြီးတရုတ်မ KTV Hostess Lu Lu အနေနဲ့လဲ ပြည်ကြီးတရုတ်မ အသံနဲ့ ဟန်ကို လုပ်ခဲ့တုန်းက တူလွန်းလို့ ကျွန်မစပြီး သတိထားမိခဲ့တာပါ...
ဒီအစီအစဉ်မှာ Michelle ဟာ ဖားအိမ်အကူ (Maid) Leticia အနေနဲ့ သရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာ ဖားတွေက သူတို့ အင်္ဂလိပ်က အဲဒိလိုမဟုတ်ပါဘူး... အဲဒိထက်သာပါတယ်... ဒါဟာ လူမျိုးရေးခွဲခြားတာပါ... ဖားတွေ ဒီလိုလေသံမျိုးနဲ့ စကားပြောရင် ဟောလိဝုတ်မှာတောင် ဖားတွေ ဒီလိုနေရာရလာမှာမဟုတ်ပါဘူး... ဖားအဆိုတော်တွေဟာ ခုဆို ဟောလိဝုတ်မှာ အဆိုတော်တွေဖြစ်နေပါပြီ...(မဆိုင်တာတွေဆွဲထည့်တာ... )
အများကို မူတည်ပြီးပြောတာ... လူနည်းစုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး... ဒါကို မဆိုင်တဲ့ ဖြစ်မြောက်နေတဲ့ ၁ယောက် ၂ယောက်နဲ့ လာမခြေပနဲ့... တရုတ်မအများစု မျက်နှာသာ မိတ်ကပ်နဲ့ ချိုင်းမွှေးမရိတ်တာ အဲဒိအစီအစဉ်မှာလှောင်ထားတယ်... ဒါပေမဲ့ တရုတ်မတိုင်း ချိုင်းမွှေးမရိတ်ဘူးလို့ ဘယ်သူမှမပြောဘူး... တခြားလူမျိုးတွေကို ဟာသလုပ်တာတောင် တခြားက ဘာမှမဖြစ်ရဘူး... သူတို့လူမျိုးပြောတော့မှ မခံမရပ်နိုင်တွေထဖြစ်နေတယ်... ပြည်ကြီးမတွေကို ပြောတုန်းကတော့ "ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ" ဆိုပြီး သွား ၃၆ချောင်းပေါ်အောင်ဖြီးပြီး လက်ခုတ်တီးနေပြီးတော့များ... (စိတ်ထဲကပြောခြင်း... မြန်မာတွေကိုလဲ အဲဒိအစီအစဉ်ထဲ အပြောမခံရအောင် ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် စည်းကမ်းရှိရှိနေစေချင်တယ်... သိပ်သိသာလာလို့ ပြောခံရရင်တော့ ဖားတွေလိုမဖြစ်အောင် အသိလေးကပ်)... သူတို့ဖားတွေလေသံ အမေရိကန်သံပေါက်လားမပေါက်လား ဟိုနေ့က စကာင်္ပူရောက်တာ မကြာသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကို Michelle ရဲ့ Leticia လုပ်တဲ့ ဗွီဒီယို အသံဖွင့်ပြပြီး အဲဒါ သူဘာလူမျိုးအသံနဲ့ပြောတာလဲဆိုတော့ ဖိလစ်ပင်းအသံမှတ်လားတဲ့.... ကဲ ... ရှင်းရော...
The Noose: Leticia
The Noose : Lu Lu (နောက်ဆုံး MBS နားကပုံကတော့ Malaysian တွေကို နောက်တာ)
အင်္ဂလိပ်စကားဆိုတာ ကိုယ့်စကားလဲမဟုတ်ဘူး... သူတို့ကတိုးတက်နေလို့သာ ကမ္ဘာသုံးစကားအဖြစ် ဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူအောင် သတ်မှတ်ထားတာ... အင်္ဂလန်မှာတောင် နယ်ပေါ်မူတည်ပြီး အင်္ဂလိပ်လေသံကွဲကြသေးတယ်... အမေရိကန်မှာလဲ ကွဲတာပဲ... အဓိကက ဆက်သွယ်ရလွယ်ကူဖို့နဲ့ မှန်ကန်ဖို့ပဲ... ဒါကို သူတို့က အမေကန်အင်္ဂလိပ်နဲ့ တူချင်ပြီး သိပ်ဘ၀င်မြင့်နေတဲ့ သူတို့ဟာ ကပ်ပါးကောင်တွေလို့ပဲလို့ ကျွန်မထင်မိတယ်... အဲဒါ ဘာကိုပြသလဲဆိုရင် "မပြည့်တဲ့အိုး ဘောင်ဘင်ခတ်" တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပဲ...
အွန်လိုင်းမှာ တွေ့တွေ့နေတဲ့ ဘောင်ဘင်ခတ်နေတဲ့ ဖားတွေလို မဖြစ်အောင် သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ သတိရှိရမယ်...
အွန်လိုင်းမှာဆွေ့ဆွေ့ခုန်နေတဲ့ ဖားတွေကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်က ဘာမဆိုင်ညာမဆိုင် ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အသဲယားမိတော့ မဗေဒါလဲ ကိုယ့်ဒုက္ခကိုယ်ရှာတာပဲ... သိတယ်... ဒီတော့ကိုယ်လဲ ကိုယ့်ဘလော့မှာ ကိုယ့်သဘောထားကိုယ်ရေးတယ်... ကြိုက်သလို သဘောထားကွဲလို့ရတယ်...
Posted by mabaydar at 4:40 PM 20 comments :
Labels: Humour , မုန်တိုင်း
မဗေဒါတစ်ယောက် ခရစ်စမတ်ပိုစ့်တွေရေးမယ်.. နှစ်သစ်ကူးဆုတောင်းတွေ မဏ္ဍိုင်တွေထားမယ်ဆိုပြီး စိတ်ကူးတွေယဉ် ဓာတ်ပုံတွေလဲ ခရစ်စမတ်မှာရိုက်ဖြစ်တယ်... ဒါပေမဲ့ ပိုစ့်တစ်ပုဒ်မှတက်မလာဘူး...
ရှေ့ပိုစ့်မှာရေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ အလုပ်သစ်ကထင်မထားပဲ ဘောနက်စ်လေးလဲပေးလိုက်ရော အခြေအနေမပေးလို့ မေ့ပျောက်ထားတဲ့ရောဂါဟောင်းက ထလာတယ်... ခရီးသွားချင်တာလေ... ဒီနှစ်ရဲ့ Trip resolution ထဲမှာ တရုတ်ပြည်မဟာတံတိုင်းကြီးရှိတဲ့ ဘေဂျင်းကိုသွားချင်ခဲ့တယ်... အဲဒိကနေစပြီး ပရိုမိုးရှင်းတွေ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေဟိုကြည့်ဒီကြည့်လုပ်ဖြစ်တာ... နောက်တော့ ဘေဂျင်းက ခုချိန်မှာ ရေခဲမှတ်အောက်အေးနေတယ်ကြားတာရော လေယာဉ်လက်မှတ်ကလဲ ဒီလောက်မသက်သာတာရောကြောင့် ဟောင်ကောင်ဖြစ်သွားတယ်...
မထင်မှတ်ပဲ လေယာဉ်လက်မှတ်စစ်လိုက်တော့ အဲဒိကသက်သာနေတယ်... ဒေါ်လာ၃၀၀ အောက်ပဲရှိတယ်...(ရက်ပေါ်မူတည်ပြီးဈေးကွာတယ်... ကိုယ်ကတော့ ဈေးတန်ဆုံးနဲ့ အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မဲ့ရက်ကိုရွေးရတာပေါ့) နောက်တော့ ဘယ်သွားသွားကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုရင် လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းကို စိတ်ဝင်စားလားလို့ အဖော်စပ်တော့ သူကရတယ်တဲ့... အသွားတော့ ကီလိုမ၀ယ်ဘူး... အပြန်တော့ ရှော့ပင်းထွက်ဖြစ်ရင်ပါလာမှာဆိုတော့ ကီလို ၂၀ပိုဝယ်လိုက်တယ်...
ဒါနဲ့ ၂ယောက်သား ဟိုတယ်တွေစ စုံစမ်းရရော... Tour Package နဲ့သွားရင် ပိုလဲသက်သာတယ် အဆင်လဲပြေတယ်ဆိုပင်မဲ့ မဗေဒါရဲ့ အကြိုက်က ကိုယ့်ဟာကိုယ်သွား ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်စီစဉ်ပြီး အဲဒိသွားမဲ့နေရာက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး သွားမဲ့နေရာရဲ့နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေ ဘာကြောင့်နာမည်ကြီးလဲတွေ စတဲ့ ကိုယ်သွားမဲ့နိုင်ငံရဲ့ ဗဟုသုတကို သိရတာကို ပိုကြိုက်တယ်... အဲဒါကြောင့်ပိုက်ဆံနည်းနည်းအကုန်ခံ လူနည်းနည်းအပင်ပန်းခံပြီးလုပ်တာ... မိန်းကလေး ၂ယောက်တည်းသွားမှာဆိုတော့ နေဖို့ကအတော်လေး သတိထားရမယ်... Hostel တွေ Guesthouse တွေရှိတယ်ဆိုတာ သိပင်မဲ့ မနေရဲဘူး... တချို့ဆိုဈေးတော်တော်သက်သာပင်မဲ့ ၆ယောက်တစ်ခန်း မိန်းကလေးဆောင် ယောကျာင်္းလေးဆောင်ခွဲထားပါရဲ့.... ဒါပေမဲ့ မနေချင်ပါဘူး... ၀က်ဆိုဒ်တွေပေါ်မှာတော့ အဖြူတွေကတော့ အဲလိုနေရာတွေကို တော်တော် Recommend ပေးကြတယ်... သူတို့ကတကယ်တော့ Budget သမားတွေ...
နောက်ဆုံး ရှော့ပင်းနဲ့လည်းနီး ဘူတာရုံနဲ့လဲနီး စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့လဲနီး မြို့လယ်ကောင်လဲဖြစ်မဲ့... Tsim Sha Tsui, Kowloon နေရာက ဟိုတယ်ကိုရွေးလိုက်တယ်... ကျွန်မတို့က သွားမဲ့ရက်ထက် ၁လလောက်ကြိုဘွတ်ကင်တင်တော့ ပရိုမိုးရှင်းနည်းနည်းရှိတယ်... ၅ညအိပ် ၆ရက်ခရီးကို တစ်ယောက် စကာင်္ပူဒေါ်လာ ၅၀၀ လောက်နဲ့ရတယ်... (ပျမ်းမှ တညကို စကာင်္ပူဒေါ်လာ ၁၀၀ လောက်ကျတယ်)... ခုကြည့်တာ အခန်းဈေးက ၁ညကို စကာင်္ပူဒေါ်လာ ၁၅၀လောက်ဖြစ်သွားပြီ... ဒါပေမဲ့ ကျွန်မတို့ထက်သက်သက်သာသာနဲ့ရတဲ့သူလဲရှိမှာပါ... ဘွတ်ကင်လုပ်တဲ့ အချိန်နဲ့ ကိုယ်သွားမဲ့နေ့ပေါ်မူတည်ပြီးဈေးတွေက ပြောင်းတယ်...
မြန်မာပတ်စပိုစ့်ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ခရီးသွားကြိုက်တဲ့ ကျွန်မ ဗီဇာယူဖို့လဲ မညှိုးလုံးပါပဲ... မြန်မာတွေတခြားနိုင်ငံကို ခရီးသွားတာ စလုံးတွေထက်ချမ်းသာမှရတာ အပိုကုန်စရာတွေရှိတယ်လေ... ကိုယ်လာမှာကို သိချင်တယ်ဆိုတော့လဲ သွားပြောရတာပေါ့... ဟောင်ကောင်ဗီဇာက တရုတ်ပြည်မကြီးနဲ့ မတူဘူး ဖောင်သက်သက်တင်ရတယ်... ဒါပေမဲ့ ခက်တာက တရုတ်သံရုံးဝက်ဆိုဒ်ပေါ်မှာကြေငြာချက်တစ်ခုတွေ့တယ်... အဲဒါကတော့ တရုတ်ဗီဇာတွေကို အေးဂျင့်ကပဲလျှောက်ခွင့်ပေးတော့မယ်ဆိုတာရယ်... နောက်ကျွန်မကို လန့်ဖြန့်သွားစေတာကတော့ ဟောင်ကောင်ဗီဇာက ၁လကြာမယ်ဆိုတာပါပဲ... ကျွန်မတို့ လေယာဉ်လက်မှတ်တွေ ဟော်တယ်တွေက ၀ယ်ပြီးပြီ refund မရှိဘူး... ၀ယ်တာမှ ဒီဇင်ဘာလလယ်လောက်မှဆိုတော့ ၁လမကျန်တော့ဘူး...
ဖေ့ဘွတ်ပေါ်ကိုယ့်ဒုက္ခတွေတက်အော်တော့ လမ်းပြကြယ်တစ်ယောက်ကိုရှာတွေ့တယ်... သူက ကျွန်မတို့မသွားခင် ရှေ့တစ်ပတ်သွားဖို့စီစဉ်ထားပြီး ဟောင်ကောင်ဗီဇာက တရုတ်သံရုံးမှာသွားလျှောက်လို့ရသေးကြောင်းနဲ့ ၃ရက် ၄ရက်ပဲကြာကြောင်း ပြောတော့မှ စိတ်အေးရတယ်... ဒါတောင် တရုတ်ဆိုတာလဲ ခုတမျိုးတော်ကြာတစ်မျိုးဆိုတော့ လန့်နေရတယ်...
အွန်လိုင်းက ဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့ ဗီဇာဖောင်ဖြည့်ရန်
ပတ်စပိုစ့် မူရင်း မိတ္တူ (အနည်းဆုံး ၆လ သက်တမ်းရှိရန်လို)
ပတ်စပိုစ့် ဓာတ်ပုံ ၁ပုံ
ဘဏ် statement(သို့)ဘဏ်စာအုပ် ၃လစာမိတ္တူ
(၀က်ဆိုဒ်ပေါ်မှာတော့ payslip ၃လစာပြရမယ်ဆိုပြီး တကယ်သွားတော့ မလိုဘူးတဲ့)
အထူးသတိပြုရန် ပီအာသက်တမ်းတိုးထားတဲ့သူများ Re-entry permit ယူသွားရန်... မဗေဒါမပါသွားလို့ ၂ခေါက်သွားလိုက်ရတယ်...
ရုံးက မနက် ၉နာရီကနေ ၁၁ခွဲထိပဲ ဗီဇာလက်ခံတယ်... ညနေပိုင်းဘာလုပ်လဲမသိ... ပြန်ယူတော့လဲ အဲဒိအချိန်ပဲ... သွားလျှောက်တဲ့နေ့ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်လုံး ဆေးခွင့်ယူရတယ်... သူက အင်္ဂါနေ့တင်ပြီး ထူးစမ်းစွာပဲ ၃၁ရက် ဒီဇင်ဘာ စနေနေ့မနက်ပြန်ရတယ်... ကျွန်မက စနေနေ့မှ တင်ရတယ်... နောက်အပတ်စနေပြန်လာယူမယ်ပေါ့... သူက စနေဖွင့်တယ်မှတ်လို့... မဖွင့်ဘူးတဲ့ နောက်အပတ် သောကြာင်္ ၆ရက် ဇန်န၀ါရီလာယူတဲ့... ဒါနဲ့ နင်တို့ဒီနေ့ စနေနေ့တောင်ဖွင့်တာ နောက်အပတ်စနေမဖွင့်ဘူးလားဆိုတော့... မဖွင့်ဘူးတဲ့... ဒါဆို ဒီနေ့ဘာလို့ဖွင့်တာလဲဆိုတော့ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ ဘာတွေပြန်ပြောမှန်းမသိဘူး...
နောက်သတိပြုရမှာကတော့ ဟောင်ကောင်က မကာအိုနဲ့နီးတော့ နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ရတယ်... ဒါပေမဲ့ မကာအိုကလဲ သူ့စနစ်နဲ့သူဆိုတော့ ဗီဇာသီးသန့်လိုတယ်... ကောင်းတာက မကာအိုဗီဇာက အဲဒိကိုရောက်မှ အ၀င်မှာလျှောက်လို့ရတဲ့ Visa on arrival ဆိုတာရှိတယ်... မကာအို ပိုက်ဆံ ၁၀၀ (စကာင်္ပူ ဒေါ်လာ ၁၆)လောက်ပဲကျတယ်... သို့သော် ဟောင်ကောင်ကနေ မကာအိုကို ၁ရက်ခရီး ထွက်လိုက်ပြီးမှ ကိုယ်က ဟောင်ကောင်ကို ပြန်ဝင်မှာဆိုတော့ single entry visa လျှောက်လို့မရဘူး... Double visa လျှောက်ရမယ်ထင်တယ်ဆိုပြီး သံရုံးကလူကိုမေးတော့ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ Double visa လျှောက်ရမယ်တဲ့... ဗီဇာကြေးက စကာင်္ပူ ဒေါ်လာ ၅၀ ကျတယ်...
ဒီလိုနဲ့ ဗီဇာလဲရ... ဟိုတယ်လဲ သေချာ... လေယာဉ်လဲ ကွန်ဖန်းဆိုတော့မှ...
ဟောင်ကောင်က H5N1 BIRD FLU ဖြစ်လို့တဲ့... သူများသွားမယ်ဆိုပြီး ဟိုတယ်တွေ လေယာဉ်တွေအားလုံးစီစဉ်ပြီးမှ အဲဒါကထဖြစ်တယ်... ဒါပေမဲ့လဲ အရမ်း serious တော့မဟုတ်တာကတစ်ကြောင်း ဟိုရောက်ရင် အစားအသောက်ဆင်ခြင်ပြီး သန့်သန့်ရှင်းရှင်းနေဖို့ ဆုံးဖြတ်တာကတစ်ကြောင်း ဆေးမျက်နှာဖုံးလေးတွေယူသွားပြီး အုပ်ဖို့စဉ်းစားတာက တစ်ကြောင်းနဲ့ သွားတာကတော့ သွားမှာပါပဲ....
ခုတော့ ဟောင်ကောင်အကြောင်း စုဆောင်း ရထားလမ်းမြေပုံလဲ ဒေါင်းပြီး Print ပြီး... ဟောင်ကောင်မြေပုံလဲ Print ပြီး... ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာတွေကတော့ ရှာလေတွေ့လေမို့ ဗျာများနေတုန်းပဲ ဘယ်သွားရမလဲဆိုတာ... သေချာတာတော့ မကာအိုက ၁ရက် ဘုရားကြီး (giant Buddha)ရှိတဲ့ ကျွန်းနဲ့ အနီးတ၀ိုက်က တစ်ရက်ပဲ... ဒါတောင် ၅ညအိပ် ၆ရက်ခရီးမို့အချိန်နည်းနည်းရလို့တော်သေး...
ဟောင်ကောင် Tourist Attraction
ဒီလိုဒီလိုတွေကြောင့် မဗေဒါတစ်ယောက် ခရစ်စမတ်မှာလဲ ခရီးသွားဖို့ ရှော့ပင်းထွက်.. နယူးရီးယားလဲ ရှော့ပင်းထွက်... ဟိုရောက်ရင်လဲ ရှော့ပင်းထွက်အုံးမှာကိုပဲ... ခု ဘာရယ်ညာရယ်မဟုတ် ရှော့ပင်းထွက်ကောင်းတာ ခရီးသွားဖို့ဆိုပြီး ၀ယ်လိုက်တာ ဖိနပ်အသစ် ၃ရံဖြစ်သွားတယ်... အိမ်မှာအစတည်းကရှိတဲ့ ဘုရ်ှကြီးကိုလဲ ယူသွားချင်သေးတယ်... လေယာဉ်ကဖြင့်ရတဲ့ ကီလိုက အသွားမှာ ၁၀ကီလိုပဲ... ခုတော့ စိတ်နာနာနဲ့ တချို့ကို ထားခဲ့မယ်...
ရတဲ့ဘောနက်စ်ကတော်တော် သုံးလိုက်တာက များများ ဘောနက်စ်မရခဲ့ရင်တောင် ဒီလောက်သုံးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး... ဒါပေမဲ့လဲ သွားမဲ့သွားတော့ အတွေ့အကြုံတွေကို အပြည့်ခံစားရအောင် ကိုယ်လာခဲ့မည် ဟောင်ကောင်ဆီ.............
Posted by mabaydar at 4:28 PM3comments :